Ingabe imidiya "Yezenhlalo" ngempela? | Martech Zone
Ingabe imidiya "Yezenhlalo" ngempela?
NgoLwesibili, ngoJuni 19, i-2007 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Nginabangani abangama-36 Facebook, Ukuxhumana okungu-122 ku-LinkedIn, Amalungu ayi-178 ku- I-MyBlogLog umphakathi, idlanzana ku-MySpace, cishe abangani abangama-60 ku-Yahoo! Isilayezi Esisheshayo, ama-20 ku-AOL Messenger esheshayo kanye noxhumana nabo abangama-951 abangene I-Plaxo! Nami ngikhona URyze, MyColts.net, Jaiku, Twitter futhi ngifunde cishe amabhulogi wabangani abayishumi nambili (phakathi kokuphakelayo okungama-300 noma okunye engikuqoqayo futhi ngiyibuyekeze).
Nginamahloni okutshela abantu ukuthi ngine-akhawunti ezintathu ze-Intanethi… hhayi eyodwa. Ucingo lwami luxhunyiwe, ikhaya lami lixhunyiwe, futhi ngine-akhawunti ye-T-Mobile yokufinyelela ku-Starbucks naseMingceleni (lapho do hlangana nabangane). Nginayo futhi emsebenzini, kunjalo. Ungahleka, kepha amathuba ukuthi uzofakwa izintambo ezingeni elifanayo eminyakeni embalwa, futhi. Kwenzeka nje ukuthi kube umsebenzi wami nokuzilibazisa.
Njengoba kunikezwe yonke imithombo yezokuxhumana engiyingxenye yayo, ingabe ngileso senhlalo?
Bengikhuluma nabanye ochwepheshe bezentengiso abangenzi nzuzo ngelinye ilanga futhi ngazama ukuchaza Ukuphila kwesibili kubo. Zama ukuchaza iMpilo Yesibili ukuphrinta ochwepheshe bezentengiso zemithombo yezindaba futhi awukwazi ukusiza kepha uthole ukuhleka kanye nokuhleka. Ekugcineni othile wathi:
“Lokhu akuzwakali ukuthi ngiyinhlalo. Kuzwakala kuphikisana nomphakathi. ”
Inothi Lomuntu Siqu: Impilo Yesibili nakanjani iyizinga le-uber-geekdom engingazami ukulithola. Nginezingqinamba ezanele nge-First Life yami kunokusebenza kweyesibili.
Ngicabanga ukuthi wayefile. Lokhu akuyona neze inhlalo. Ukuxhumana nomphakathi kudinga okungaphezu kokubuka, ukufunda noma ukulalela… kukhona ukubona umzimba womuntu, ukuheha, ukuthinta, ukuhogela… ukubheka nje emehlweni abo.
Kwesinye isikhathi lapho ngisebenza kakhulu emsebenzini wami, indodakazi yami izongena kukhompyutha ngemuva kwami ​​(ngamamitha ayisithupha ubude) futhi IM mina… “Sawubona Baba! lol ”(uneminyaka engu-13). Imvamisa ngiphenduka ngiqale ukuhleka… kusho ukuthi ngibe sekhompyutheni isikhathi eside ngokwanele futhi ngidinga ukuchitha isikhathi esithile ngiqaphile. Ngokujabulisayo, uzozichithela phezu kwesihlalo sami bese engiphutha lapho ngize ngisuke kude ne-laptop. Nginenhlanhla yokuba nomuntu onendaba nami ngokwanele ukwenza lokho.
Ku-2000, a inkawu ilawula ingalo nge-Intanethi. Manje kukhona nokuqalisa, okubizwa I-Numenta, esebenza ukufanisa ubuhlakani bokufakelwa nobuhlakani bomuntu.
Lokhu sekuqala ukungikhumbuza amaTelosians esiqeshini sokuqala seStar Trek. Babengama-dudes amabi anamakhanda amakhulu anonile ayezogcina abantu beyiziboshwa ngokwakha imibono emakhanda abo ngocingo lwe-telepathically. (Ngitshele ukuthi uyakukhumbula lokho Isiqephu, "Isibaya". Kwakungu-pre-Shatner ngisho! Umshayeli wendiza obiza kakhulu ku-NBC).
Sasivame ukuxhunywa kuphela emsebenzini, bese ekhaya, manje kumakhalekhukhwini wethu… ingabe ubuchopho buyalandela ngempela? Ngabe sizoba nanoma yiluphi uhlobo lwempilo ngaphandle kwe-Intanethi? Kuyaqala ukwethusa, akunjalo?
Yebo, uma sikwazi ukuxhuma ngobuchopho kwi-Intanethi, cabanga nje ukuthi singabhala ngokushesha kangakanani futhi sisebenzise ikhodi. Ngingakha ipulazi lonjiniyela elinamapayipi ekhofi ne-pizza ecubuziwe ngamashubhu esisu bese ngakha I-One Point Five Life. (Kwenye indawo phakathi kokuPhila kokuQala nezeSibili).
Akuzwakali kakhulu emphakathini kimi, futhi. Ngidinga ukuphuma okuningi.
PS: Ngabe ucabanga ukuthi i-akhawunti yeBrain 'Net izosebenza ini?
Iningi lingibiza ngoDoug, namuhla bekungubaba
Thatha leyo iPhone!
Jun 19, 2007 ku-9: 36 PM
Ingabe lesi yisikhathi esibi sokukutshela ukuthi uphuthelwe yikhonsathi ENKULU e-The Lawn ngoLwesihlanu ebusuku, noma isikhathi esihle sokukukhumbuza ukuthi ubukhona bakho bulahlekile? Sikufisela inhlanhla ngokuxhuma kwakho ngezikhathi ezithile. Kungisebenzele kahle kakhulu. Ngingahle ngibe nolwazi oluncane kodwa ngizizwa ngixhumene nabantu ngokwengeziwe.
Jun 19, 2007 ku-10: 00 PM
Ukuphuthelwa yikhonsathi ngoLwesihlanu nakanjani kukukhuthazile lokhu okuthunyelwe, uJulie! 🙂
Jun 20, 2007 ku-3: 40 PM
Cisha ifoni yakho ngezikhathi ezithile.
Cisha i-imeyili ngezikhathi ezithile.
Hamba uyobona izintaba namahlathi nolwandle!
Akunasidingo sempilo yesibili, cha, thx!
Nginobuchwepheshe obanele ku impilo yokuqala manje! 🙂